साहित्यकार डा. रेणुका थापा 'सोलु' संग कोरोना संबाद : भन्नुहुन्छ, 'मेसिन जस्तो जिन्दगी मान्छे जस्तो बनाएको छ' - Rahashya Khabar Online News Portal Rahashya Khabar Online News Portal
साहित्यकार डा. रेणुका थापा ‘सोलु’ संग कोरोना संबाद : भन्नुहुन्छ, ‘मेसिन जस्तो जिन्दगी मान्छे जस्तो बनाएको छ’
प्रकाशित मिति: २०७६ चैत्र २५, मंगलवार २१:२७
प्रस्तुति : गणेश खतिवडा
हामी सबैलाई थाहा छ पहाडको जीवन निकै नै कष्टपूर्ण हुन्छ । अझ त्यसमा पनि दुर्गम पहाडको अनकण्टार गाउँमा हामी जन्मिएका भए हाम्रो जीवनमा घटेका घटना सहरी जीवन मात्र जानेकाहरूका लागि एकादेशको कथा सरह हुन्छ । त्यस्तै एकादेशको कथाको सानो अंश म आज प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
सोलुखुम्बु जिल्लाको अत्यन्त दुर्गम गाउँ सोताङमा जन्मिएर बिहान साँझ घाँस, दाउरा र मेलापात गर्दै हुर्किएकी साहित्यकार रेणुका थापा ुसोलुु बल्लतल्ल दिएको एस एल सी परीक्षामा एउटा विषय लागेपछि गाउँ छोडेर हिड्नुभयो । त्यो समयमा अनेकौँ अन्धविश्वास र कुरीतिहरूलाई चिर्दै एउटी छोरीमान्छेले गाउँ छोड्नु कतिको सजिलो थियो भन्ने त मैले व्याख्या गर्नै नपर्ला । निकै हठी, दृढ निश्चय भएकी साहसी उहाँले आफन्तहरूको सहयोगमा तराई तथा काठमाडौमा अध्ययन गर्दै अन्त्यमा सोलुखुम्बु जिल्लाबाटै विद्यावारिधि गर्ने पहिलो महिला बन्न सफल बन्नुभयो ।
यति गर्दासम्म उहाँको जीवन कति संघर्षपूर्ण भयो होला त्यो सामान्य मान्छेको अनुमान भन्दा बाहिरको कुरा होला । झण्डै डेढ दर्जन साहित्यिक कृति तथा सोलुखुम्बु आउनु है हजुर बोलको गीत समेत बजारमा ल्याइसक्नुभएको उहाँले यहाँसम्म आउँदा थुप्रै कहरहरू सामना गर्नुपर्‍यो । आफूले भोगेको जस्तो दुस्ख अरूले भोग्नु नपरोस् भन्ने कुरामा उहाँ सधैँ सचेत हुनुहुन्छ । अझ महिलामाथि पर्न गएको दुस्खले उहाँलाई धेरै पिरोल्छ ।
अहिले विश्वभरि फैलिएको कोभिड(ज्ञढ को त्रासले विश्व नै डग्मगाएको छ । हाम्रो नेपाल पनि यसैका कारण लकडाउनमा छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपसचिवको जिम्मेवारी समेत समेत सम्हाल्दै आउनुभएकी साहित्यकार डा। रेणुका थापा ुसोलुु यतिबेला विश्वविद्यालयको छात्रावासमा फसेका विद्यार्थीहरूलाई रासन पानीको व्यवस्था गर्न खट्दै हुनुहुन्छ ।
यसै बीचमा उहाँलाई लकडाउनको कहरपूर्ण अवस्था र उहाँले बनाउनुभएको योजनाका बारेमा मैले प्रश्न राख्दा उहाँले दिनुभएको जवाफ जस्ताको तस्तै यहाँ राखेको छु । मलाई त यो प्रेरणादायी बन्यो नै, सायद तपाईहरूलाई पनि बन्नसक्छ ।
पक्कै पनि लकडाउन कहरपूर्ण हुन्छ र पीडादायी बन्छ । आफू त सोचिराछु यो हाम्रो मात्रै कुरा भएन । सारा ब्रह्माण्ड नै पीडामा छ । तर पनि म आफू चाहिँ गाउँमा जन्मिहुर्किएकाले के थाहा छ भने यो प्रत्यक्ष लकडाउनले विश्वका धनी देश, सहर पहिला समात्यो र हाहाकारको समाचार बन्यो तर गाउँमा सालैपिच्छे लकडाउन हुने समय हो यो । माघदेखि जेष्ठसम्म खाना न पानी बाँच्न बाध्य भएका जनता अझै छन् । दुरदराजमा उनीहरूको लकडाउन कहिल्यै समाचार बनेन् किनकी उनीहरूको सञ्चारमा पहुँच थिएन र छैन । कोदोको खोले, पानीसोल्दर र ढिँडो , वनका सागपात तथा कन्दमूल खाएका दृष्य आँखैमा छन् । त्यसैले यसलाई कोकोहोलो मच्चाउनु भन्दा पनि फुर्सदको समयलाई रचनात्मक बनाउन प्रयत्न गरिरहेकी छु । केही समसामयिक विषयवस्तुलाई समातेर लेख लेख्दैछु, केही कविता पनि कोर्दैछु । अनि लघुकथा पनि लेखिरहेकी छु । अहिलेको वातावरणले समसामयिक भन्दा अरू विषय समात्न दिएको छैन । परिवारसङ्ग सङ्गै बसेर मिठोपिठो नखाएको पनि वर्षौं भैसकेछ । मेसिनजस्तो जीन्दगी अहिले केही समयलाई भए पनि मान्छे भएर बाँच्न पाएकी छु । अनि लकडाउनका कारण कोठाभित्रै थुनिएका खाना समस्यामा परेकालाई आफुले सकेको केही सम्भव भएसम्म सहयोग वितरणमा पनि सहयोग गर्दैछु ।आपतमा सहयोग गर्नु भनेको नै सबैभन्दा ठूलो धर्म हो लाग्छ । यसरी सहयोग गर्न पाउँदा आत्मसन्तुष्टी लाग्छ । यसर्थ खुसी छु । खुसी भएर मात्रै आत्मबल दह्रो हुन्छ र बाँच्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ । बेलाबेलामा सरकारलाई खबरदारी गर्ने जनताको भूमिका पनि निर्वाह गर्दैछु । यस्तै छ हजुर मेरो दैनिकी ।मेरा बारेमा सोधिदिनुभयो हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।
रन्जना पराजुली लम्सालको ‘आर्तनाद’उपन्यासको लोकार्पण
काठमाडौं। उपन्यासकार रन्जना पराजुली लम्सालको उपन्यास “आर्तनाद”को लोकार्पण गरिएको छ। साहित्यिक पत्रकार संघद्वारा राजधानीमा आयोजित
राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा टीका आत्रेय प्रथम
काठमाडौं । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले वार्षिकरूपमा आयोजना गर्दै आएको राष्ट्रिय कविता महोत्सव यस वर्ष पनि
चर्चित गीतकार तथा कवयित्री शान्ति शर्माका दुई कृति एकैसाथ सार्बजनिक
काठमाडौं।चर्चित गीतकार एबम् कवयित्री शान्ति शर्माको अर्को कवितासङ्ग्रह ‘सपनाको समाधि’र ‘नसोधिदेउ बिन्ती’नामक म्युजिक भिडियो एकैदिन